Bozoma Saint John nwere ike ịhapụ Apple n'ọdịnihu dị nso | Esi m mac
Bozoma Saint John nwere ike ịhapụ Apple n'ọdịnihu dị nso
Bozoma Saint John bụ, ya na Eddy Cue na Jimmy Lovine, ndị isi njikwa Apple Music n'ime ụlọ ọrụ ahụ, mana dịka asịrị ndị kachasị ọhụrụ sitere na akwụkwọ Axios, na-ekwu maka isi mmalite niile, Saint John na-ezube ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ n'ọdịnihu dị nso. Igwe okwu a agbalịrị ịkpọtụrụ onye ọrụ Apple nke nwere ike ikwenye ma ọ bụ gọnarị ozi ọma ahụ, mana ụlọ ọrụ ahụ ajụla ikwu okwu ọ bụla. Bozoma Saint John bụ ugbu a isi ahịa nke Apple Music, ụlọ ọrụ ọ bịara mgbe ọ zụrụ Beats Music na 2014, ụlọ ọrụ ọ bịara mgbe ọ bụ onye isi na Pepsi.
Na mbu, ọ na-arụ ọrụ na mkparịta ụka na nkwekọrịta maka Apple Music, mana ka ọnwa gafere mgbe ịzụrụ Beats, ọ malitere ịmalite ọrụ dị ukwuu na ngosi nke ngwa Apple Music na ntọala nke Nzukọ Worldwa maka Ndị Mmepe abụọ afọ ndị gara aga. Kemgbe ahụ Boz, dịka ezigbo ndị enyi ya na-akpọkarị ya, aburula onye nochite anya nke Apple Music. Dịka ọmụmaatụ, October gara aga, onye isi ahụ pụtara n'akụkụ onye isi osote nke ịntanetị, ngwanrọ na ọrụ Eddy cue, Jimmy Lovine na James Corden, onye bụ isi na-akwado Carpool Karaoke.
N’ọnwa Nọvemba gara aga, akwụkwọ akụkọ Fortune kpọrọ Bozoma ka ha bịa n’ọgbọ na-abịa abịa n’ọgbọ ọzọ, ebe o kwuru maka mbata ọ kwagara na mba Amerịka site na Ghana dịka nwata. Ọ pụtakwara na listi Billboard magazine Power 100 ndepụta, February afọ a, na na Black Enterprise n'akwụkwọ ndepụta nke Mostmụ nwanyị kachasị Ike na Azụmaahịa na Machị.
Ọ bụrụ na asịrị ndị a mechara kwenye, Apple ga-efunahụ otu n'ime ndị isi nwanyị ole na ole ụlọ ọrụ ahụ ka nwere Ndị a gụnyere Lisa Jackson dị ka osote onye isi oche nke amụma gburugburu ebe obibi, Angela Ahrendts dịka onye na-ahụ maka ụlọ ahịa Apple na ụlọ ahịa na Denise Young Smith onye osote onye isi oche nke nsonye na iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Bozoma Saint John nwere ike ịhapụ Apple n'ọdịnihu dị nso
Ọ bụ eziokwu, ọ dị ka ọ laghachi na Boney M !!!!.
Zaghachi Jimmy iMac
A Levi si denim jaket, atụdo na WWDC nzere ntozu